Waa maxay barnaamijka tafatirka fiidyaha ee ugu fiican? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waa maxay barnaamijka tafatirka fiidyaha ee ugu fiican?
Iris Gamen | | Design Graphic, dhowr
Maqaalkan waxaan uga hadlaynaa waa maxay barnaamijka ugu wanaagsan ee video editing, tan waxaan u sameyn doonaa xulashada barnaamijyada ugu isticmaalka badan.
Habka tafatirka fiidiyowyada badanaa waa caajis, tan iyo waxay u baahan tahay shaqo taxadar leh oo uu sameeyo tifaftiruhu, in aad ka taxadarto tallaabo kasta oo ay qabato, taasna waa in aad haysataa barnaamij tafatir muuqaal ah oo buuxinaya baahiyahaaga.
Fiidiyowyada waxaa lagu daabaci karaa guriga kombayutarkeena ama mobilkayaga, laakiin haddii waxa aad raadineyso ay tahay daabacaad xirfad leh waxaad u baahan tahay koox sida ay tahay, oo leh processor awood leh, kaydin weyn, kaadh sawireed oo wanaagsan, iyo ugu yaraan 16GB RAM kaarka.
1 Isbarbardhigga barnaamijyada tafatirka muuqaalka
1.1 Adobe Ciyaar CC Pro
1.4 Adobe Premiere Elements
1.5 Wondershare Filmora
Isbarbardhigga barnaamijyada tafatirka muuqaalka
Qaybta soo socota, waxaan is barbardhigi doonaa shan ka mid ah software-ka ugu wanaagsan uguna darajada sareeya ee tafatirayaasha fiidiyoowga ah ee tifaftirayaasha waxaanan tilmaami doonaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiin.
Adobe Ciyaar CC Pro
Waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka fiidiyaha ee xirfadleyda ah ee ku jira qolka Adobe. Waxaad ku heli kartaa adiga oo bixinaya khidmadda is-diiwaangelinta, taas oo dadka isticmaala ku gelisa kharash joogto ah bishii ama sannadle, laakiin lacagtaas marka lagu daro helitaanka tifaftiraha fiidiyowga, waxay sidoo kale heli karaan muuqaal kale oo hal abuur leh iyo codsiyada tafatirka dhawaaqa.
Marka la eego saamaynta gaarka ah ee ay bixiso Adobe Premier Pro, waxay ka dambaysaa barnaamijyada kale ee tafatirka fiidiyaha, maadaama ay awooddo noqo mid gaabis ah haddii xallinta muuqaalku aad u sarreeyo, markaa tusaale ahaan fiidiyowyada 4K, processor-ka wanaagsan iyo kaadhka sawirada ayaa lagama maarmaan noqon doona.
Adobe Premier Pro CC waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwan Barnaamijyada tafatirka muuqaalka ugu wanaagsan maanta wuxuuna ina soo bandhigayaa fursado kala duwan marka la eego wax-soo-saarka kadib.
Faa'iidooyinka Adobe Premiere Pro CC
Qalab kala duwan si aad u hesho daabacaad xirfad leh
La jaan qaada abka kale ee Hal-abuurka Cloud
Tafatiraha IOS iyo Windows labadaba
Qalabka aqoonsiga shayga iyo wejiga.
Khasaaraha Adobe Premiere Pro CC
Bixinta kharashka si aad u gasho
Waxay noqon kartaa caajis saameyn gaar ah
Waxay ku burburi kartaa tiro badan oo xog ah
Barnaamij gaar ah oo loogu talagalay macOS sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin la jaan qaada marka lagu ciyaaro Windows.
Thanks to nidaamkeeda sumadda, waxay kuu ogolaaneysaa inaad abaabusho mashaariicda ugu adag. Barnaamijku waxa kale oo uu leeyahay qalab tafatirka maqalka iyo saamaynta muuqaalka, oo dhan oo leh hawlgal hufan. Waa isku dhafka u dhexeeya kuwa ugu xirfadda badan iyo farsamada ugu fudud, si loo gaaro dhammaan noocyada daawadayaasha, labadaba xirfadlayaasha iyo kuwa bilowga ah.
Sida mid ka mid ah software-ka tafatirka fiidiyaha ugu fiican, waxay bixisaa xog xogeed xooggan waxayna si joogto ah u ballaarineysaa faylalka muuqaalada.
Faa'iidooyinka Final Cut Pro
Maareyn fudud oo dareen leh
360 digrii fiidiyoow tafatir iyo muuqaal tayo sare leh
Khasaarooyinka Final Cut Pro
Waxa kaliya oo loo isticmaali karaa macOS
Aan ku socon karin noocyada kale ee Final Cut
DaVinci Resolve waxaa loo tixgeliyaa qalab xirfadeed oo run ah, maadaama qaar ka mid ah agaasimayaasha filimada ay la shaqeeyaan. Waa barnaamij loogu talagalay dhagaystayaasha aqoonta u leh tafatirka.
Waxaa jira nooc bilaash ah oo ah DaVinci Resolve 17, kaliya waa inaad soo dejiso oo ku rakibtaa kumbuyuutarkaaga. Dhanka kale, nooca DaVinci Resolve Studio 17 waa la bixiyaa wuxuuna ku dhow yahay 300 euro, laakiin dhexdeeda waxaan ka heli karnaa wax kasta oo ka mid ah nooca bilaashka ah iyo qalab kala duwan oo kala duwan.
Barnaamijka tafatirka, isagoo ah qalab xirfad leh, waa ku habboon Windows, Linux iyo macOS. Waxa ay ogolanaysaa in la tafatiro qaabab kala duwan, iyo in la awoodo in aad horudhac u yeelato wax soo saarka. DaVinci Resolve ayaa muddo ka dib u kobcay si ay u noqoto madal tafatir weyn.
Faa'iidooyinka DaVinci Resolve
La jaan qaada Windows, Linux iyo OS ka badan
barnaamij aad u deggan
Shaqooyin kala duwan oo ballaadhan
Interface user-saaxiibtinimo iyo horudhac wax soo saar
Khasaaraha DaVinci Resolve
Barnaamij xirfadeed, waa lagama maarmaan in la yeesho aqoon
Waxay u baahan tahay xasuus badan iyo kaadhka garaafyada awood badan
Nooc lacag-bixineed oo dhammaystiran
Barnaamijka loogu talagalay abuurista clips gaaban si fudud, sidaas darteed ma aha lagama maarmaan in la yeesho aqoonta tafatirka si loo isticmaalo.
Faa'iidooyinka barnaamijkan waxaa ka mid ah in uu leeyahay automation iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka si loo saxo midabka, maqalka iyo tafatirka, taas oo keenta maarayn fudud oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay natiijooyin wanaagsan ka helaan wax soo saarkooda.
Waxaan ka heli karnaa casharro barnaamijka dhexdiisa ah oo uu na baro waxa ay u yihiin iyo sida qalabyada kala duwani u shaqeeyaan.
Faa'iidooyinka Adobe Premiere Elements
Interface user aad u fudud
Kala duwanaanshaha shaqooyinka
Qasaarooyinka Adobe Premiere Elements
Waxaa laga yaabaa inaad dhibaato kala kulanto tafatirka iyo daawashada fiidiyowyada
Wondershare Filmora waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka ugu fiican ee la bilaabo. Waxaan ka heli karnaa laba nooc, qaabka fudud, halkaas oo software-ku uu qabto shaqada oo dhan, maadaama isticmaaluhu kaliya uu ku shubo cajaladaha iyo muusikada. Iyo dhinaca kale, waxaa jira habka horumarsan, halkaas oo horeyba habka tafatirka isticmaaluhu uu leeyahay madax-bannaani dheeraad ah.
Waad ku mahadsan tahay qalabkeeda fudud Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha cusub inay abuuraan muuqaal xirfad leh, muuqaalo heer sare ah hab fudud.
Faa'iidooyinka Wondershare Filmora
Si fudud loo isticmaalo interface
Taageero 4k fiidiyow
Leh qaab kamarad ficil gaar ah
Khasaaraha ka mid ah Wondershare Filmora
In ay version xorta ah muuqaaladu waxay leeyihiin watermark
Ma laha tafatirka kamarado badan
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar marka ay timaado barnaamijyada tafatirka muuqaalka, iyo si aad u doorato mid waa inaad horay u sii barbar dhigto. Waa in aad falanqeyso midka ku habboon baahidaada oo aad go'aansato midka adiga kugu habboon., maadaama sida aan aragnay, farqiga u dhexeeya mid iyo kan kale ayaa ah inta badan isticmaalka, kharashka lagu bixinayo, waafaqsanaanta nidaamyada iyo tirada qalabka ay ku siinayaan.
Ka dib xulashadan shanta barnaamij ee tafatirka fiidiyaha ugu fiican, waxaan dhihi karnaa in mid ka mid ah barnaamijyada ugu dhameystiran iyo kuwa ugu casrisan uu yahay Adobe Premiere Pro CC, maadaama ay bixiso fursado badan oo tafatir ah, iyo sidoo kale faa'iidada ay leedahay in la jaanqaado kuwa badan. Codsiyada hal-abuurka leh Cloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay barnaamijka tafatirka fiidyaha ee ugu fiican?
Waa maxay macnaha muuqaalku?